KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Alur Amharic Amis Arabic Armenian Armenian (West) Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bashkir Bassa (Cameroon) Belize Kriol Bengali Bicol Boulou Bulgarian Cakchiquel (Western) Catalan Cebuano Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chol Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Damara Dangme Danish Douala Dutch Edo Efik English Esan Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Garifuna Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Jula Kabiye Kabuverdianu Kannada Kekchi Kikamba Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Kurdish Kurmanji Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Low German Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Mam Mambwe-Lungu Marathi Marshallese Maya Mazatec (Huautla) Mbunda Mingrelian Mixe (North Central) Mixtec (Guerrero) Mongolian Moore Motu Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngabere Norwegian Nzema Okpe Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Pidgin (West Africa) Polish Ponapean Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Bolivia) Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Sepulana Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin South African Sign Language Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tajiki Tamil Tarascan Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tshiluba Tsonga Tswana Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzeltal Tzotzil Ukrainian Urhobo Uzbek Uzbek (Roman) Venda Vietnamese Waray-Waray Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zulu
PO SO hyɛn bi nam Atlantic po so rekɔ Europa; asorɔkye rebɔ no. George Young ka nnipa a wɔte po so hyɛn no mu ho. Ɔredwinnwen Ahenni adwuma a wayɛ wɔ Brazil a ɔregyaw hɔ akɔ no ho, na ne koma atɔ ne yam. * Nanso, bere a Onua Young nam kwan so rekɔ no, ɔdanee n’adwene kɔɔ asasesin foforo a na ɔrekɔyɛ mu adwuma no so. Ná ɛyɛ Spain ne Portugal; ɛyɛ asasesin kɛse a ɛkame ayɛ sɛ na obiara nkaa asɛmpa no wom. Sɛ odu hɔ a, Bible mu ɔkasa ahorow a na Onua J. F. Rutherford bɛba hɔ abɛma no, na ɔbɛyɛ ho nhyehyɛe. Afei nso, na ɔbɛkyekyɛ nkratawa 300,000!
Akwan pii a George Young tutu kɔyɛɛ asɛnka adwuma no, odii po so akɔneaba
Bere a Onua Young duu Lisbon afe 1925 osutɔbere mu no, na basabasayɛ rekɔ so. Amanyɔkuw a na wɔrepere dodow amammu no tuu Ahemfo amammu no gui afe 1910, na wogyee tumi a Katolek Asɔre no wɔ no fã kɛse no ara fii wɔn nsam. Wei maa nnipa a wɔwɔ ɔman no mu nyaa ahofadi kɛse, nanso ɔmanfo no kɔɔ so yɛɛ basabasa wɔ ɔman no mu.
Bere a Onua Young yɛɛ Onua Rutherford kasa no ho nhyehyɛe ara pɛ na aban no maa asraafo bedii tumi hyehyɛɛ mmara, efisɛ na nkurɔfo pɛ sɛ wotu aban no gu. Kuw bi a wɔkyerɛ Bible ase kɔ kasa ahorow mu (British and Foreign Bible Society) kyerɛwfo bɔɔ Onua Young kɔkɔ sɛ sɛnea ɛte biara, obehyia ɔsɔretia. Ɛno mpo no, Onua Young kɔɔ Camões Ntoaso Sukuu mu kɔsrɛɛ ɔdan a nkurɔfo teɛteɛ wɔn apɔw mu wom no, na wɔde maa no!
Afei May 13 dui; saa da no na na wɔahyehyɛ sɛ Onua Rutherford bɛma ne kasa no. Ná obiara rehwɛ kwan denneennen! Wɔde nkrataa a wɔakyerɛkyerɛw so de rebɔ baguam kasa no ho dawuru fomfam dan ho; wɔde bi kɔɔ atesɛm nkrataa mu. Ná ɔkasa no asɛmti ne “How to Live on the Earth Forever” (Sɛnea Wobɛtena Asase So Daa). Nyamesomfo a wɔsɔre tia yɛn yɛɛ ntɛm tintim asɛm bi wɔ wɔn atesɛm krataa mu. Wɔde bɔɔ nkurɔfo a wɔkenkan kɔkɔ sɛ wɔnhwɛ wɔn ho yiye wɔ “atoro adiyifo” foforo a wɔaba hɔ no ho. Wɔn a wɔsɔre tia yɛn no begyinaa ɔdan a nkurɔfo teɛteɛ wɔn apɔw mu wom no ano kyekyɛɛ nhomawa mpempem pii maa nkurɔfo. Ná nsɛm a ɛwom no tia nsɛm a na Onua Rutherford rekyerɛkyerɛ no.
Ne nyinaa akyi no, nnipa bɛyɛ 2,000 bɛhyɛɛ baabi a wohyiaam no mã, na wɔmaa nnipa dodow a ɛte saa nso san kɔɔ wɔn fie efisɛ wɔannya baabi antena. Afoforo a na wɔn ani gye ho pa ara sɛ wobetie ɔkasa no foro susoo nhama antweri bi a na ɛwɔ ɔdan no nkyɛn mu; ebinom nso foro tenatenaa mfiri a nkurɔfo de teɛteɛ wɔn apɔw mu no so.
Biribiara ankɔ so dwoodwoo. Wɔn a wɔsɔre tia yɛn no teɛteɛɛm, na wobubuu nkongua. Nanso Onua Rutherford hyɛɛ ne ho so, na ɔtɔɔ ne bo ase foro gyinaa ɔpon bi so sɛnea ɛbɛyɛ a sɛ ɔkasa a obiara bɛte ne nne. Onua Rutherford wiee ne kasa no bɛyɛ ɔdasum. Nnipa bɛboro 1,200 a wɔn ani gyee asɛm no ho de wɔn din ne wɔn address mae sɛ wɔmmrɛ wɔn Bible ho nhoma. Ade kyee ara pɛ, atesɛm krataa a wɔato din O Século tintim asɛm bi faa Onua Rutherford kasa no ho.
Lizzie ne Virgílio Ferguson tumi krataa a wɔde tenaa ɔman no mu, afe 1928
September 1925 no, wofii ase tintim Ɔwɛn-Aban a ɛwɔ Portugal kasa mu wɔ Portugal. (Ná wɔadi kan atintim Ɔwɛn-Aban wɔ Portugal kasa mu dedaw wɔ Brazil.) Ɛbɛyɛ sɛ saa bere no ara na Bible Suani bi a ne din de Virgílio Ferguson a ɔwɔ Brazil yɛɛ nhyehyɛe sɛ obetu akɔ Portugal akɔboa Ahenni adwuma no. Ná wadi kan ne Onua Young ayɛ adwuma wɔ Bible Asuafo no baa dwumadibea ketewa a ɛwɔ Brazil no. Ankyɛ na Virgílio ne ne yere Lizzie de po so hyɛn siim sɛ wɔne Onua Young rekɔyɛ adwuma bio. Onua Ferguson duu Portugal bere pa mu, efisɛ na ɛrenkyɛ na Onua Young afi hɔ akɔyɛ asɛnka adwuma no wɔ aman foforo so; aman no bi ne Soviet Union.
Bere a asraafo tuu aban gui wɔ Portugal no, ɛde kankabi nniso baa hɔ, na wɔsɔre tiaa yɛn som adwuma no. Onua Ferguson nyaa akokoduru, na wamfi ɔman no mu. Ɔtotoo nneɛma sɛnea ɛbɛyɛ a ɔbɛbɔ Bible Asuafo kakra a wɔwɔ hɔ no ho ban, na wahyɛ wɔn den ama wɔakɔ so ayɛ asɛnka adwuma no. Obisaa atumfoɔ no kwan sɛ ɔpɛ sɛ wɔyɛ asafo nhyiam daa wɔ ne fie. October 1927 no, wɔpenee so maa no.
Afe a edi kan a kankabi nniso no dii ɔman no so no, nnipa bɛyɛ 450 kraa Ɔwɛn-Aban wɔ Portugal. Afei nso, nkratawa ne nhomawa maa nokware no trɛw kɔɔ akyirikyiri wɔ Portugal Ahemman no mu; eduu Angola, Azores, Cape Verde, East Timor, Goa, Madeira, ne Mozambique.
Afe 1929 no, turo hwɛfo hobrɛasefo bi a ne din de Manuel da Silva Jordão a ɔyɛ Portugalni baa Lisbon. Bere a ɔwɔ Brazil no, otiee baguam kasa bi a Onua Young mae. Ankyɛ koraa na ohui sɛ nokware no ni, na na ɔpɛ pa ara sɛ ɔboa Onua Ferguson ma wɔtrɛw asɛnka adwuma no mu. Nea ɛbɛyɛ na Manuel atumi ayɛ saa no, ɔyɛɛ colporteur; kan no, saa na na wɔfrɛ akwampaefo. Saa bere no, na asafo no ayɛ nhyehyɛe pa ma wotintim Bible ho nhoma kyekyɛ, enti asafo foforo a na ɛwɔ Lisbon no nyaa nkɔso!
Afe 1934 no, na ɛsɛ sɛ Onua ne Onuawa Ferguson san kɔ Brazil. Nanso, na wɔagu nokware aba no. Basabasayɛ a ɛkɔɔ so wɔ Europa bere a na Spain Ɔmanko ne Wiase Ko II rekɔ so no, anuanom anokwafo kakraa bi a na wɔwɔ Portugal no kɔɔ so bataa Yehowa ho. Bere bi, sɛnea yɛbɛka no no, saa anuanom kuw no bɛyɛɛ sɛ nnyansramma a ɛreyɛ adum. Nanso afe 1947, bere a John Cooke a ɔyɛ ɔsɛmpatrɛwfo a wakɔ Gilead a odii kan kɔɔ Portugal no duu hɔ no, wɔn gya no ano san yɛɛ den. Ɛno akyi no, Ahenni adawurubɔfo no dodow kɔɔ anim bere nyinaa. Bere a aban no baraa Yehowa Adansefo som adwuma no afe 1962 mpo no, adawurubɔfo no dodow kɔɔ anim. December 1974, bere a wogyee Yehowa Adansefo toom wɔ mmara mu no, na adawurubɔfo a wɔwɔ ɔman no mu boro 13,000.
Ɛnnɛ, Ahenni adawurubɔfo bɛboro 50,000 na wɔreka Onyankopɔn Ahenni ho asɛmpa no wɔ Portugal ne nsupɔw a wɔka Portugal kasa wɔ so; ebi ne Azores ne Madeira. Adawurubɔfo a wɔwɔ hɔ nnɛ no bi yɛ nkurɔfo a wokotiee kasa titiriw a onua Rutherford mae wɔ afe 1925 no asefo. Wɔyɛ saa nkurɔfo no awo ntoatoaso a ɛto so mmiɛnsa.
Yɛda Yehowa ase; saa ara nso na yɛda anuanom mmarima ne mmea anokwafo a wodii kan de akokoduru dii anim trɛw asɛmpa no mu no ase. Wɔyɛ ‘Kristo Yesu baguam asomfo ma amanaman no.’—Rom. 15:15, 16.—Tete wɔ bi ka, Portugal.
^ nky. 3 Hwɛ asɛmti a wɔato din, “Otwa Adwuma no Nsae Koraa” wɔ May 15, 2014, Ɔwɛn-Aban, kr. 31-32.
Share Share Sɛnea Woguu Ahenni Aba a Edi Kan Wɔ Portugal
Hann Kurafo Ma Amanaman Pii
Onyankopɔn Adom Yɛn Wɔ Akwan Pii So